Shiinaha Xarkaha loo gooyay ee loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Beihai Fiberglass
1.Waxay ku saleysan tahay wakiilka isku xirka silane iyo qaabeynta qiyaasta gaarka ah, oo ku habboon PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
2.Widely isticmaal baabuurta, qalabka guriga, filtarka, guryaha bamka, iska caabin daxalka kiimikada iyo qalabka isboortiga.
Xargaha la jarjaray ee loogu talagalay Thermoplastic waxay ku saleysan yihiin wakiilka isku xirka silane iyo qaabeynta qiyaasta gaarka ah, oo ku habboon PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP.
Istarooyinka la jarjaray ee loo yaqaan 'E-Glass' oo loo yaqaan 'thermoplastic' ayaa loo yaqaan 'daacadnimada' xargaha, socodka sare iyo hantida wax soo saarka, oo keenaya qalab farsamo iyo tayo sare leh dusha sare ee alaabteeda la dhammeeyay.
Wakiilka isku xidhka ee Silane kaas oo keena guryaha qiyaasta miisaaman.
Qiyaasta cabbirka qaaska ah ee bixisa isku xirnaanta udhaxeysa xargaha la jarjaray iyo cusbada miisaanka
Hufnaan 3.Excellent iyo qulqulka qulqulka, awoodda caaryada wanaagsan iyo kala firidhsan
Guryaha farsamada 4.Excellent iyo xaaladda dusha sare ee wax soo saarka farcan
Geedi socodka Cirbadaha iyo Cirbadaha
Xoojinta (fiilooyinka la jarjaray ee fijarka dhalada ah) iyo cusbada kuleylka kuleylka kuleylka ah ayaa lagu qasan yahay qalajiyaha. Qaboojinta ka dib, kuleylka waxaa lagu jarjaray jajabyo heerkul-hawleed la xoojiyay. Jiirarka waxaa lagu quudiyaa mashiinka wax lagu shubo oo la isku duro si ay u sameeyaan qaybo dhammeeyey.
Noocyada loo yaqaan 'E-Glass' ee loo yaqaan 'Thermoplastics' ee loogu talagalay Thermoplastics waxaa badanaa loo isticmaalaa cirbadeynta iyo xoqidda waxqabadka waxqabadka iyo codsiyada ugu dambeeya ee isticmaalka dhammaadka waxaa ka mid ah baabuurta, qalabka guryaha, filtarka, guryaha bamka, iska caabbinta kiimikada iyo qalabka isboortiga.
Dheer dherer, mm
Danab u adkaysta
Iska caabinta Hydrolysis, dhalaal wanaagsan
Ballaca Balaastiigga, μm
Ballaca balaastigga (%)
Mawduuca Qoyaanka (%)
Dhererka jaranjarooyinka (mm)
Hore: Xadhkaha La Gooyey Oo Qoyan
Xargaha la jarjaray ee loogu talagalay Pa
Xarkaha la jarjaray ee loogu talagalay Pa6
Xargaha la jarjaray Pp